Xildhibaan Fiqi oo Guddoomiyaha Golaha Shacabka ku eedeeyey dib-udhaca Kulanka Golaha – Kalfadhi
Xildhibaan Fiqi oo Guddoomiyaha Golaha Shacabka ku eedeeyey dib-udhaca Kulanka Golaha
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayaa ku eedeeyey Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal Sh. Cabdiraxmaan, inuu baajiyey Kulankii ugu horeeyey ee uu yeelan lahaa Golaha Shacabka maanta. Waxa uu sheegay in, haddii uu Guddoomiyuhu sii joogi lahaa daqiiqado yar Xarunta Golaha Shacabka, uu buuxsami lahaa Kooramka Golaha, sida uu hadalka u dhigay.
“Waxaa ayaan-darro ah in Gudoonka Golaha Shacabka oo sugi jiray ilaa kowda, si Kooramku u buuxsamo, markey daneynayaan iyagu ajandaha in markay hal saac joogeen, oo ay dhiman tahay dhawr iyo toban Xildhibaan, oo ay waliba qaarkood soo galeen intuu hadlayey, qaarna wadada ku soo jireen in uu sugi waayey Baarlamaankii fadhigiisii maanta, uuna sidaas ku xiro” ayuu yiri Xildhibaan Fiqi.
Xildhibaanku waxa uu sheegay inuu Guddoomiyaha Golaha Shacabku yiri “Saacad baan fadhiyey, saacad kalena kuma dari karo”, taas oo uu ku tilmaamay in ay la tahay ayaan-darro weyn, sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu sheegay inuu Goluhu 2 bil ku maqnaa fasax, uuna xiiso u qabay kulankiisa maanta, laakiin uu si deg deg ah Gudoomiye Mursal ugu dhawaaqay inuu kulanku baaqday maanta.
“Inuu 15 maalin ka hor furmo ayey ahayd inuu Golaha Shacabku, mana furmin, maanta markuu furmi lahaana si deg deg ah ayaa lagu xiray” ayuu yiri Xildhibaan Fiqi. “Arrintaasi runtii arrin Ummadda Soomaaliyeed qabata maaha” ayuu hadalkiisa sii raciyey. Golaha Fullinta ayuu, sidoo kale, ku eedeeyey inuu noqday mid wax ka maamula ajandayaasha Golaha Shacabka. “Amnigii bey dayaceen, markii la yiri halal xisaabtamana fadhigii ayey baajiyeen” ayuu yiri Fiqi.
Xildhibaan Fiqi waxa uu sheegay in haddii uu Guddoonka Goluhu iska baxo, iyagoo u arka inuu sii furnaado Kulanka Golaha, ay Guddoon ka dhigayanaan qofka ugu da’da weyn Golaha Shacabka, taas oo ah xaalad la arki jiray uun marka Goluhu cusub yahay, uusanna wali sameysan hogaan. “Suurtagal ma ahan in Guddoomiyaha Golaha Shacabku maalinba burus ku dhufto, oo uu yiraahdo fadhiga waa xiran yahay” ayuu yiri Xildhibaan Fiqi. “Fadhiga waxaa furaya qofka ugu da’da weyn hadduu Guddoonku baxo” ayuu hadalkiisa raaciyey.
Xildhibaan Fiqi ayaa ka mid ah tiro Xildhibaanno 20 kudhawaad gaaraya, oo gudbiyey Mooshin lagu dalbanayo in Kulanka 1-aad ee Golaha Shacabka looga hadlo xaaladaha amaan darrida ee ku soo xoogeysanaya Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho. Waxa uu sheegay in, iyada oo dhismayaasha ku dhegan Golaha Shacabka ay ka muuqdaan dhaawacyadii qaraxyadii ay dadku ku le’deen, kuna hanti waayeen, aysan macquul u ahayn in ay ka hadlaan dastuur. Wuxuu rabaa in laga doodo amaanka dalka.
Garowe oo weli wajahaysa caqabado kaga yimaadda isqaqabsiga dhulka. – Warbixinta Kalfadhiga 26aad
Wasaaradda maaliyadda Puntland oo wakiillada u sheegtay in siyaasadaha xukuumadan iyo tii hore aysan ku lug lahayn miisaaniyadda